Black Friday History : What To Expect And Where To Shop | Net Guide
Home Article Black Friday History : What To Expect And Where To Shop
Black Friday ဟာ အမရေိကနျမှာ ကြေးဇူးတျောနပွေီ့းရငျ နောကျတဈနမှေ့ာ ကရြောကျပါတယျ။ အတိအကပြွောရမယျဆိုရငျ နိုဝငျဘာလရဲ့ လေးပတျမွောကျ ကွာသပတေးနေ့ ဖွဈပါတယျ။ 1932 ခုနှဈကတညျးက အမရေိကနျမှာ ခရဈစမတျ စြေးဝယျရာသီအစအဖွဈ အဲဒီနကေို့ သတျမှတျခဲ့တာဖွဈပွီး 1961 ခုနှဈအထိ ဒီလိုသုံးနှုနျးခဲ့ပါတယျ။ နှဈ 20 ကွာပွီးနောကျ အဲဒီစကားစုကို ပိုမိုအသုံးပွုလာကွပါတယျ။ စြေးဆိုငျမြားက အဲဒီနကေို့ အကြိုးအမွတျရှာကွတဲ့နအေ့ဖွဈ သတျမှတျခဲ့ပါတယျ။ စြေးဆိုငျမြားက အစောကွီး ဖှငျ့လှဈကွပါတယျ။ ဆိုငျပိတျခြိနျကိုလညျး တိုးမွှငျ့ပေးကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အရောငျးမွှငျ့တငျခွငျး အစီအစဉျမြားကိုလညျး ပွုလုပျပေးကွပါတယျ။ Black Friday ဟာ တရားဝငျအားလပျရကျတော့ မဟုတျပမေယျ့ ကယျလီဖိုးနီးယားနဲ့ အခြို့ပွညျနယျမြားမှာ အစိုးရဝနျထမျးမြားကို အားလပျရကျအဖွဈ သတျမှတျပေးထားပါတယျ။
စြေးဆိုငျမဟုတျတဲ့ ၀နျထမျးမြားနဲ့ ကြောငျးသားမြားကိုလညျး အဲ့ဒီနမှေ့ာ ပိတျပေးကွပါတယျ။ ကြေးဇူးတျောနနေဲ့ စနေ၊ တနင်ျဂနှေ အပါအဝငျ လေးရကျကွာ အနားရတဲ့အခြိနျ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ စြေးဝယျသူ မြားပွားတဲ့ အခြိနျလညျး ဖွဈပါတယျ။ 2005 ခုနှဈကတညျးက နှဈစဉျ စြေးဝယျယူမှု အမြားဆုံးအခြိနျ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ နှဈတဈနှဈအတှငျးမှာ ရကျကွာကွာ စြေးဝယျယူမှု အမြားဆုံးအခြိနျ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနှဈ 2019 အတှကျ ကရြောကျတဲ့ BLACK FRIDAY နရေ့ကျကတော့ နိုဝငျဘာနောကျဆုံးပတျ သောကွာနဖွေ့ဈတဲ့ Friday, November 29 ပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီတပတျမှာတော့ BLACK FRIDAY အကွောငျး သိမှတျဖှယျရာအခြို့၊ 2019 BLACK FRIDAY မှာရော ဘယျလိုစြေးဝယျခွငျးတှေ ပွုလုပျနိုငျမလဲ။ BLACK FRIDAY လိုမြိုး အခွားစြေးဝယျရကျတှေ အကွောငျးကို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ကြေးဇူးတျောနေ့ အပွီးနောကျတဈနဟေ့ာ အားလပျရကျ စြေးဝယျရာသီဖွဈရတဲ့ အကွောငျးအရငျးမှာ ဆနျတာကလော့ဈနဲ့ ပတျသကျနပေါတယျ။ ခရဈစမတျဟာ ကြေးဇူးတျောနေ့ ပွီးနောကျ အဓိက အားလပျရကျ ရာသီဖွဈနလေို့ ဖွဈပါတယျ။ 19 ရာစုနဲ့ 20 ရာစု နှောငျးပိုငျးမှာ ကြေးဇူးတျောနနေဲ့ ဆနျတာကလော့ဈပှဲမြားကို စြေးဆိုငျမြားက ကငျြးပခဲ့ကွပါတယျ။ အဲဒီအထဲမှာ Eatorn’s , Macy’s Thanksgiving Day Parade တို့က ပံ့ပိုးကူညီမှုဖွငျ့ ကနဒေါရှိ Toronto Santa Claus Parade ပါဝငျပါတယျ။ ကြေးဇူးတျောနနေဲ့ ခရဈစမတျ စြေးဝယျရာသီဟာ 1930 ခုနှဈမှာ အငွငျးပှားဖှယျရာ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ စြေးဆိုငျမြားက စြေးရောငျးကာလကို ပိုမို ကွာစခေငျြပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဓလထေုံ့းစံကိုလညျး မပယျဖကျြခငျြကွပါဘူး။ အဲဒီအတှကျ 1939 ခုနှဈမှာ သမ်မတ ဖရနျကလငျ ဒီရုစဗဲ့က နိုဝငျဘာလ နောကျဆုံးအပတျရဲ့ ကွာသာပတေးအစား လေးပတျမွောကျ ကွာသာပတေးနကေို့ ကြေးဇူးတျောနအေ့ဖွဈ တရားဝငျပွဌာနျးခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ စြေးဝယျရာသီ ပိုမိုကွာမွငျ့ခဲ့ပါတယျ။ လူအမြားစုက သမ်မတရဲ့ ပွောငျးလဲမှုကို နှဈသကျခဲ့ပါတယျ။ 2015 ခုနှဈမှာ Amazon က ဇူလိုငျလမှာ Prime Day ကို ကငျြးပခဲ့ပွီး Black Friday ထကျ ပိုမို လြှော့စြေးနဲ့ ရမယျလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ အခွား ကုမ်ပဏီမြားကလညျး ဇူလိုငျလမှာ ပါဝငျဆငျနှဲခဲ့ပါတယျ။
(2). Black Friday စကားလုံးရဲ့ ဇာဈမွဈ
Black Friday စကားလုံးကို 1975 ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ 29 ရကျနမှေ့ာ The New York Times က စတငျသုံးစှဲခဲ့ပါတယျ။ သူရညျညှနျးတာက ဖီလာဒယျဖီးယားမှာ တဈနှဈတာအတှကျ အစညျကားဆုံး စြေးဝယျခွငျးနဲ့ လမျးပိတျဆို့မှု ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီစကားလုံးကို 1980 ခုနှဈမှာ တဈနိုငျငံလုံးက သိလာကွပါတယျ။ ကုနျသညျမြားက အဲဒီစကားလုံးကို အသုံးပွုပွီး အရောငျးမွှငျ့တငျခဲ့ကွပါတယျ။ ကြေးဇူးတျောနေ့ အပွီးနောကျတဈရကျမှာ အမွတျမြားစှာရဖို့ ကွိုးစားခဲ့ကွပါတယျ။ 2013 ခုနှဈမှာ ပွညျတှငျးစဈမဖွဈမီ တောငျအမရေိကနျမှာ အဲဒီစကားလုံး စတငျပေါကျဖှားလာတယျလို့ သတငျးတှထှေကျခဲ့ပါတယျ။ ဒါကို 2015 ခုနှဈမှာ Snopes.com ကနေ ငွငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။ George Washington လကျထကျကတညျးက ကြေးဇူးတျောနကေို့ အမြိုးသားနအေ့ဖွဈ သတျမှတျခဲ့ပမေယျ့ သမ်မတ လငျကှနျးလကျထကျမှသာ အားလပျရကျအဖွဈ သတျမှတျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
(3). ဘယျလိုအခြိနျတှမှော ရောငျးခလြရှေိ့လဲ
BLACK FRIDAY နရေ့ကျမှာတော့ အရောငျးဆိုငျတှဟော နံနကျ6နာရီကတညျးက ဖှငျ့လှဈရောငျးခနြတော နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွာပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ 2000 ခုနှဈနှောငျးပိုငျးမှာ နံနကျ4နာရီ ၊5နာရီကတညျးက ရောငျးခကြွပါတယျ။ 2011 မှာတော့ Target, Kohl’s, Macy’s, Best Buy, Bealls အပါအဝငျ ဆိုငျတျောတျောမြားမြားက ညသနျးခေါငျအခြိနျမှာ စတငျဖှငျ့လှဈ ရောငျးခလြာကွပါတယျ။ 2012 ခုနှဈမှာ Walmart နဲ့ ဆိုငျတျောတျောမြားမြားက ကြေးဇူးတျောနမှေ့ာ ည 8 နာရီမှာ စတငျ ရောငျးခမြယျလို့ ကွညောခဲ့ပါတယျ။ 2014 ခုနှဈမှာ JCPenney, Best Buy, Radio Shack တို့လို အရောငျးဆိုငျမြားက ကြေးဇူးတျောနမှေ့ာ ညနေ5နာရီမှာ စတငျရောငျးခပြေးပွီး Target, Walmart, Belk, Sears တို့က ညနေ6နာရီမှာ စတငျရောငျးခခြဲ့ကွပါတယျ။ Rhode Island, Maine နဲ့ Massachusetts ပွညျနယျသုံးခုက Blue Laws အရ ကြေးဇူးတျောနမှေ့ာ စူပါမားကတျမြားနဲ့ စြေးဆိုငျမြားကို ရောငျးခခြှငျ့ ပိတျခဲ့ပါတယျ။
Confident brunette leaning against the wall and texting
(4). BLACK FRIDAY အတှကျ မှတျသားထားစရာ အရောငျးဆိုငျမြား
Black Friday နရေ့ကျမှာတော့ ဖုနျးအရောငျးဆိုငျကွီးတှနေဲ့ ကှနျရကျဆိုငျရာ ဝနျဆောငျမှုပေးသူတှဟော စြေးနှုနျးလြော့ခခြွငျး၊ အံ့သွလောကျစရာ ကမျးလှမျးခကျြတှနေဲ့ သူတို့ရဲ့ သုံးစှဲသူတှကေို ဆှဲဆောငျကွပါတယျ။ တကယျလို့ သငျ့အနနေဲ့ Black Friday စြေးဝယျရကျကို အကောငျးဆုံး ဖွတျသနျးခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီနရောတှကေို မှတျသားထားဖို့ လိုပါတယျ။ သူတို့ကတော့ Amazon ၊ Walmart၊ Currys Black ၊ Argos ၊ John Lewis ၊ AO.com နဲ့ Best Buy တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အှနျလိုငျးဖုနျးစတိုးဆိုငျတှအေနနေဲ့ဆိုရငျ Carphone Warehouse, Phones.co.uk, Mobiles.co.uk နဲ့ Fonehouse.co.uk. တို့ပါ။ ယခုနှဈအတှကျ စြေးလြော့ရောငျးခနြိုငျတဲ့ဖုနျးတှကေတော့ Huawei P30 နဲ့ P30 Pro ၊ OnePlus7၊ OnePlus7Pro ၊ iPhone 11 ၊ XR လိုဖုနျးမြိုးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
(5). Target Black Friday 2019 : Expected Sales
BLACK FRIDAY ရဲ့ သမိုငျးကွောငျးတှအေရ နှဈတိုငျးမှာ အပွိုငျအဆိုငျ စြေးလြော့ရောငျးခမြှုတှကေို ကွုံတှပေ့ါတယျ။ ပွောရမယျဆိုရငျ Cyber Monday လိုအရောငျးပှဲထကျတောငျ ပိုရောငျးကောငျးစဖေို့ ကွိုးပမျးကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီရောငျးခမြှုမှာ ပွိုငျဘကျအရောငျးဆိုငျတှရေဲ့ အပွိုငျအဆိုငျရောငျးခမြှုတှကေို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ 2019 အတှကျ သုံးစှဲသူတှကေို အကောငျးဆုံး ပဈမှတျထားရောငျးခဖြို့ ပွငျနတေဲ့အရောငျးဆိုငျတှေ ရှိနပေါတယျ။ သူတို့တှကေ့တော့ Walmart အနနေဲ့ Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ဖုနျးတှေ အရဈကဝြယျယူတဲ့ သူတှကေို ဒျေါလာ 300 တနျ လကျဆောငျကတျတှပေေးဖို့ စီစဉျထားတာပါ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ မနှဈက 2018 Walmart ရဲ့ Best Black Friday အရောငျးပှဲတျောရကျမှာ iPhone XS, iPhone XS Max (သို့) iPhone XR ဝယျယူသူတှကေို $300 gift card ပေးခဲ့ပွီး PlayStation4GranTurismo Sport VR Bundle ဝယျသူတှကေတော့ ဒျေါလာ 100 သကျသာခဲ့ပါတယျ။ Microsoft Xbox One X 1TB Console ဝယျသူတှလေညျး ထိုနညျးလညျးကောငျး 100 လောကျ သကျသာခဲ့ပါတယျ။ Samsung Galaxy S10, S10+, Note 10 ဝယျယူသူတှအေတှကျလညျး $300 Gift Card ပေးဖို့ ရှိပါတယျ။ ဒါကတော့ Best Buy က ဝယျသူတှအေတှကျပါ။ Costco ရဲ့ Black Friday အစီအစဉျတှမှောတော့ Samsung Galaxy Note 10+, Galaxy S10 (သို့) Galaxy S10+ ဝယျသူတှဟော စံခြိနျမှီ Costco Shop Card ၊ 10.1-inch ရှိတဲ့ Samsung Galaxy Tab A 128GB ကို ဒျေါလာ 100 လြော့စြေးနဲ့ ဝယျနိုငျမယျ။
(6). BLACK FRIDAY လိုမြိုး အခွားစြေးဝယျရကျတှေ Singles Day : Monday, November 11
Singles Day ကို အလီဘာဘာက ကငျြးပခဲ့တာ9နှဈရှိပွီ ဖွဈပါတယျ။ အလီဘာဘာဟာ Amazon ရဲ့ အကွီးမားဆုံး ပွိုငျဖကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ Singles Day ဟာ Valentine’s Day ကို ဆနျ့ကငျြတဲ့အနနေဲ့ ပျေါထှကျလာခွငျးဖွဈပွီး ခဈြသူ ရညျးစား မရှိသူမြား စြေးဝယျခွငျးဖွငျ့ ပြျောရှငျရအောငျ ကငျြးပပေးခွငျး ဖွဈပါတယျ။ Singles Day ကို နှဈစဉျ နိုဝငျဘာလ 11 ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပပါတယျ။ မနှဈက Singles Day အှနျလိုငျးစြေးရောငျးပှဲတျောမှာ တရုတျလူမြိုးမြားဟာ အလီဘာဘာတှငျ 24 နာရီအတှငျး ဒျေါလာ 25 ဘီလီယမျဖိုး ၀ယျယူခဲ့ပါတယျ။ 2017 မှာလညျး အထူးလြှော့စြေးမြားဖွငျ့ ရောငျးခပြေးခဲ့ပါတယျ။ ဖြျောဖွပှေဲမြားကိုလညျး ကငျြးပပေးပွီး တရုတျလူမြိုးမြားဟာ ဒျေါလာ 25.3 ဘီလီယမျ (168.2 ဘီလီယမျ ယှမျ) ဖိုး ၀ယျယူခဲ့ကွပွီး 2016 ကရရှိခဲ့တဲ့ 17.8 ဘီလီယမျထကျ 40 ရာခိုငျနှုနျး ပိုမိုတိုးတကျလာခဲ့ပါတယျ။ ငှလှေဲမှုပေါငျး 1.48 ဘီလီယမျအကွိမျ ပွုလုပျခဲ့ကွပွီး တဈစက်ကနျ့လြှငျ ငှလှေဲမှု 256000 ရှိခဲ့ပါတယျ။
(7). Black Thursday
နှဈပေါငျးမြားစှာကွာအောငျ အရောငျးဆိုငျမြားက Black Friday ပှဲကို စောသထကျစောအောငျ ဖှငျ့လှဈကွပါတယျ။ ကြေးဇူးတျောနရေဲ့ ညသနျးခေါငျအခြိနျမှာတောငျ စတငျ ရောငျးခကြွပါတယျ။ 2009 ခုနှဈမှာ Kmart က Black Friday လူစညျကားမှုကို ရှောငျရှားဖို့ ကြေးဇူးတျောနေ့ နံနကျ7နာရီမှာ စတငျ ရောငျးခပြါတယျ။2နှဈအကွာမှာ အရောငျးဆိုငျမြားက ည 8 နာရီနဲ့9နာရီမှာ ရောငျးခကြွပါတယျ။ အဲဒီလိုနဲ့ Black Thursday ပျေါပေါကျလာပါတယျ။ နောကျနှဈမြားမှာ အခွားအရောငျးဆိုငျမြားက ဒီနညျးကို ကငျြ့သုံးခဲ့ပွီး ကြေးဇူးတျောနမှေ့ာ စောသထကျစောအောငျ ရောငျးခခြဲ့ပါတယျ။ အရောငျးဆိုငျအခြို့နဲ့ မီဒီယာမြားက အဲဒီနကေို့ Gray Thursday , Brown Thursday လို့ ချေါကွပါတယျ။
(8). Cyber Week
Forbes ရဲ့ Entrepreneurs Column မှာ 2013 ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ3ရကျနကေ့ ဖျောပွခကျြအရ Black Friday ရဲ့ အှနျလိုငျးဗားရှငျး Cyber Monday ဟာ အလှနျလူကွိုကျမြားနပွေီး ရကျသတ်တပတျတဈပတျလုံး ရောငျးအားကောငျးနပေါတယျ။ CBS News ရဲ့ Travel Editor ဖွဈသူ Peter Greenberg က “ Black Friday မှာ စြေးဝယျခငျြရငျ မွပွေငျစြေးဆိုငျတှကေို ရှောငျပါ။ Black Friday , Cyber Monday အားလုံးဟာ Cyber Week ရဲ့ တဈစိတျတဈပိုငျး ဖွဈပါတယျ ” လို့ ပွောပါတယျ။
(9). Cyber Monday : Monday, December 2
Cyber Monday စကားလုံးကို 2005 ခုနှဈမှာ National Retail Federations ရဲ့ Shop.org က ဖနျတီးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ Black Friday ပွီးနောကျ တနင်ျလာနကေို့ Cyber Monday အဖွဈ သတျမှတျခဲ့ကွပါတယျ။ ကြေးဇူးတျောနေ့ အားလပျရကျမြားမှာ စြေးမဝယျနိုငျလောကျအောငျ အလုပျမြားနသေူမြား သို့မဟုတျ လိုခငျြတဲ့ ပစ်စညျးကို ရှာမတှသေူ့မြားအတှကျ တနင်ျလာနမှေ့ာ အှနျလိုငျးကနေ စြေးဝယျနိုငျအောငျ Cyber Monday ကို ဖနျတီးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီနမှေ့ာ အိမျ သို့မဟုတျ အလုပျကနေ အှနျလိုငျးကနတေဈဆငျ့ စြေးဝယျနိုငျပါတယျ။ 2013 ခုနှဈမှာ Cyber Monday ရဲ့ အှနျလိုငျးရောငျးအားဟာ ယခငျနှဈကထကျ 18 ရာခိုငျနှုနျး ပိုမိုတိုးတကျလာပွီး 1.73 ဘီလီယမျဖိုး စံခြိနျတငျ ရောငျးခခြဲ့ရပါတယျ။ လူတဈဦးလြှငျ ပမျြးမြှ ၀ယျယူမှုတနျဖိုးမှာ 128 ဒျေါလာ ဖွဈပါတယျ။ 2014 ခုနှဈမှာ Cyber Monday ဟာ အဲဒီနှဈအတှကျ ရောငျးအားအကောငျးဆုံးဖွဈခဲ့ပွီး အှနျလိုငျးမှာ2ဘီလီယမျဖိုး ရောငျးခခြဲ့ရပါတယျ။ ယခငျနှဈကထကျ 17 ရာခိုငျနှုနျး ပိုမိုတိုးတကျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Black Friday ဟာ အမေရိကန်မှာ ကျေးဇူးတော်နေ့ပြီးရင် နောက်တစ်နေ့မှာ ကျရောက်ပါတယ်။ အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင် နိုဝင်ဘာလရဲ့ လေးပတ်မြောက် ကြာသပတေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ 1932 ခုနှစ်ကတည်းက အမေရိကန်မှာ ခရစ်စမတ် ဈေးဝယ်ရာသီအစအဖြစ် အဲဒီနေ့ကို သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး 1961 ခုနှစ်အထိ ဒီလိုသုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ နှစ် 20 ကြာပြီးနောက် အဲဒီစကားစုကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ဈေးဆိုင်များက အဲဒီနေ့ကို အကျိုးအမြတ်ရှာကြတဲ့နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဈေးဆိုင်များက အစောကြီး ဖွင့်လှစ်ကြပါတယ်။ ဆိုင်ပိတ်ချိန်ကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း အစီအစဉ်များကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးကြပါတယ်။ Black Friday ဟာ တရားဝင်အားလပ်ရက်တော့ မဟုတ်ပေမယ့် ကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့ အချို့ပြည်နယ်များမှာ အစိုးရ၀န်ထမ်းများကို အားလပ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။
ဈေးဆိုင်မဟုတ်တဲ့ ၀န်ထမ်းများနဲ့ ကျောင်းသားများကိုလည်း အဲ့ဒီနေ့မှာ ပိတ်ပေးကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်နေ့နဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အပါအ၀င် လေးရက်ကြာ အနားရတဲ့အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဈေးဝယ်သူ များပြားတဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ 2005 ခုနှစ်ကတည်းက နှစ်စဉ် ဈေးဝယ်ယူမှု အများဆုံးအချိန် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ရက်ကြာကြာ ဈေးဝယ်ယူမှု အများဆုံးအချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ် 2019 အတွက် ကျရောက်တဲ့ BLACK FRIDAY နေ့ရက်ကတော့ နိုဝင်ဘာနောက်ဆုံးပတ် သောကြာနေ့ဖြစ်တဲ့ Friday, November 29 ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီတပတ်မှာတော့ BLACK FRIDAY အကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာအချို့၊ 2019 BLACK FRIDAY မှာရော ဘယ်လိုဈေးဝယ်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်နိုင်မလဲ။ BLACK FRIDAY လိုမျိုး အခြားဈေးဝယ်ရက်တွေ အကြောင်းကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတော်နေ့ အပြီးနောက်တစ်နေ့ဟာ အားလပ်ရက် ဈေးဝယ်ရာသီဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းမှာ ဆန်တာကလော့စ်နဲ့ ပတ်သက်နေပါတယ်။ ခရစ်စမတ်ဟာ ကျေးဇူးတော်နေ့ ပြီးနောက် အဓိက အားလပ်ရက် ရာသီဖြစ်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ 19 ရာစုနဲ့ 20 ရာစု နှောင်းပိုင်းမှာ ကျေးဇူးတော်နေ့နဲ့ ဆန်တာကလော့စ်ပွဲများကို ဈေးဆိုင်များက ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ Eatorn’s , Macy’s Thanksgiving Day Parade တို့က ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ကနေဒါရှိ Toronto Santa Claus Parade ပါဝင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်နေ့နဲ့ ခရစ်စမတ် ဈေးဝယ်ရာသီဟာ 1930 ခုနှစ်မှာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဈေးဆိုင်များက ဈေးရောင်းကာလကို ပိုမို ကြာစေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓလေ့ထုံးစံကိုလည်း မပယ်ဖျက်ချင်ကြပါဘူး။ အဲဒီအတွက် 1939 ခုနှစ်မှာ သမ္မတ ဖရန်ကလင် ဒီရုစဗဲ့က နိုဝင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပတ်ရဲ့ ကြာသာပတေးအစား လေးပတ်မြောက် ကြာသာပတေးနေ့ကို ကျေးဇူးတော်နေ့အဖြစ် တရားဝင်ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဈေးဝယ်ရာသီ ပိုမိုကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ လူအများစုက သမ္မတရဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ 2015 ခုနှစ်မှာ Amazon က ဇူလိုင်လမှာ Prime Day ကို ကျင်းပခဲ့ပြီး Black Friday ထက် ပိုမို လျှော့ဈေးနဲ့ ရမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အခြား ကုမ္ပဏီများကလည်း ဇူလိုင်လမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။
(2). Black Friday စကားလုံးရဲ့ ဇာစ်မြစ်
Black Friday စကားလုံးကို 1975 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 29 ရက်နေ့မှာ The New York Times က စတင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ သူရည်ညွှန်းတာက ဖီလာဒယ်ဖီးယားမှာ တစ်နှစ်တာအတွက် အစည်ကားဆုံး ဈေးဝယ်ခြင်းနဲ့ လမ်းပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစကားလုံးကို 1980 ခုနှစ်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးက သိလာကြပါတယ်။ ကုန်သည်များက အဲဒီစကားလုံးကို အသုံးပြုပြီး အရောင်းမြှင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်နေ့ အပြီးနောက်တစ်ရက်မှာ အမြတ်များစွာရဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ 2013 ခုနှစ်မှာ ပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်မီ တောင်အမေရိကန်မှာ အဲဒီစကားလုံး စတင်ပေါက်ဖွားလာတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို 2015 ခုနှစ်မှာ Snopes.com ကနေ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ George Washington လက်ထက်ကတည်းက ကျေးဇူးတော်နေ့ကို အမျိုးသားနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့် သမ္မတ လင်ကွန်းလက်ထက်မှသာ အားလပ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
(3). ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ ရောင်းချလေ့ရှိလဲ
BLACK FRIDAY နေ့ရက်မှာတော့ အရောင်းဆိုင်တွေဟာ နံနက်6နာရီကတည်းက ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် 2000 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ နံနက်4နာရီ ၊5နာရီကတည်းက ရောင်းချကြပါတယ်။ 2011 မှာတော့ Target, Kohl’s, Macy’s, Best Buy, Bealls အပါအ၀င် ဆိုင်တော်တော်များများက ညသန်းခေါင်အချိန်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ် ရောင်းချလာကြပါတယ်။ 2012 ခုနှစ်မှာ Walmart နဲ့ ဆိုင်တော်တော်များများက ကျေးဇူးတော်နေ့မှာ ည 8 နာရီမှာ စတင် ရောင်းချမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ 2014 ခုနှစ်မှာ JCPenney, Best Buy, Radio Shack တို့လို အရောင်းဆိုင်များက ကျေးဇူးတော်နေ့မှာ ညနေ5နာရီမှာ စတင်ရောင်းချပေးပြီး Target, Walmart, Belk, Sears တို့က ညနေ6နာရီမှာ စတင်ရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။ Rhode Island, Maine နဲ့ Massachusetts ပြည်နယ်သုံးခုက Blue Laws အရ ကျေးဇူးတော်နေ့မှာ စူပါမားကတ်များနဲ့ ဈေးဆိုင်များကို ရောင်းချခွင့် ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။
(4). BLACK FRIDAY အတွက် မှတ်သားထားစရာ အရောင်းဆိုင်များ
Black Friday နေ့ရက်မှာတော့ ဖုန်းအရောင်းဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ ကွန်ရက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွေဟာ ဈေးနှုန်းလျော့ချခြင်း၊ အံ့သြလောက်စရာ ကမ်းလှမ်းချက်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို ဆွဲဆောင်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ Black Friday ဈေးဝယ်ရက်ကို အကောင်းဆုံး ဖြတ်သန်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာတွေကို မှတ်သားထားဖို့ လိုပါတယ်။ သူတို့ကတော့ Amazon ၊ Walmart၊ Currys Black ၊ Argos ၊ John Lewis ၊ AO.com နဲ့ Best Buy တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းဖုန်းစတိုးဆိုင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင် Carphone Warehouse, Phones.co.uk, Mobiles.co.uk နဲ့ Fonehouse.co.uk. တို့ပါ။ ယခုနှစ်အတွက် ဈေးလျော့ရောင်းချနိုင်တဲ့ဖုန်းတွေကတော့ Huawei P30 နဲ့ P30 Pro ၊ OnePlus7၊ OnePlus7Pro ၊ iPhone 11 ၊ XR လိုဖုန်းမျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
BLACK FRIDAY ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေအရ နှစ်တိုင်းမှာ အပြိုင်အဆိုင် ဈေးလျော့ရောင်းချမှုတွေကို ကြုံတွေ့ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် Cyber Monday လိုအရောင်းပွဲထက်တောင် ပိုရောင်းကောင်းစေဖို့ ကြိုးပမ်းကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရောင်းချမှုမှာ ပြိုင်ဘက်အရောင်းဆိုင်တွေရဲ့ အပြိုင်အဆိုင်ရောင်းချမှုတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 2019 အတွက် သုံးစွဲသူတွေကို အကောင်းဆုံး ပစ်မှတ်ထားရောင်းချဖို့ ပြင်နေတဲ့အရောင်းဆိုင်တွေ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့တွေ့ကတော့ Walmart အနေနဲ့ Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ဖုန်းတွေ အရစ်ကျဝယ်ယူတဲ့ သူတွေကို ဒေါ်လာ 300 တန် လက်ဆောင်ကတ်တွေပေးဖို့ စီစဉ်ထားတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မနှစ်က 2018 Walmart ရဲ့ Best Black Friday အရောင်းပွဲတော်ရက်မှာ iPhone XS, iPhone XS Max (သို့) iPhone XR ဝယ်ယူသူတွေကို $300 gift card ပေးခဲ့ပြီး PlayStation4GranTurismo Sport VR Bundle ဝယ်သူတွေကတော့ ဒေါ်လာ 100 သက်သာခဲ့ပါတယ်။ Microsoft Xbox One X 1TB Console ဝယ်သူတွေလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း 100 လောက် သက်သာခဲ့ပါတယ်။ Samsung Galaxy S10, S10+, Note 10 ဝယ်ယူသူတွေအတွက်လည်း $300 Gift Card ပေးဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ Best Buy က ဝယ်သူတွေအတွက်ပါ။ Costco ရဲ့ Black Friday အစီအစဉ်တွေမှာတော့ Samsung Galaxy Note 10+, Galaxy S10 (သို့) Galaxy S10+ ဝယ်သူတွေဟာ စံချိန်မှီ Costco Shop Card ၊ 10.1-inch ရှိတဲ့ Samsung Galaxy Tab A 128GB ကို ဒေါ်လာ 100 လျော့ဈေးနဲ့ ဝယ်နိုင်မယ်။
(6). BLACK FRIDAY လိုမျိုး အခြားဈေးဝယ်ရက်တွေ Singles Day : Monday, November 11
Singles Day ကို အလီဘာဘာက ကျင်းပခဲ့တာ9နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အလီဘာဘာဟာ Amazon ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ပြိုင်ဖက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Singles Day ဟာ Valentine’s Day ကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ချစ်သူ ရည်းစား မရှိသူများ ဈေးဝယ်ခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်ရအောင် ကျင်းပပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Singles Day ကို နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလ 11 ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပါတယ်။ မနှစ်က Singles Day အွန်လိုင်းဈေးရောင်းပွဲတော်မှာ တရုတ်လူမျိုးများဟာ အလီဘာဘာတွင် 24 နာရီအတွင်း ဒေါ်လာ 25 ဘီလီယမ်ဖိုး ၀ယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ 2017 မှာလည်း အထူးလျှော့ဈေးများဖြင့် ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေပွဲများကိုလည်း ကျင်းပပေးပြီး တရုတ်လူမျိုးများဟာ ဒေါ်လာ 25.3 ဘီလီယမ် (168.2 ဘီလီယမ် ယွမ်) ဖိုး ၀ယ်ယူခဲ့ကြပြီး 2016 ကရရှိခဲ့တဲ့ 17.8 ဘီလီယမ်ထက် 40 ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ငွေလွှဲမှုပေါင်း 1.48 ဘီလီယမ်အကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး တစ်စက္ကန့်လျှင် ငွေလွှဲမှု 256000 ရှိခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် အရောင်းဆိုင်များက Black Friday ပွဲကို စောသထက်စောအောင် ဖွင့်လှစ်ကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်နေ့ရဲ့ ညသန်းခေါင်အချိန်မှာတောင် စတင် ရောင်းချကြပါတယ်။ 2009 ခုနှစ်မှာ Kmart က Black Friday လူစည်ကားမှုကို ရှောင်ရှားဖို့ ကျေးဇူးတော်နေ့ နံနက်7နာရီမှာ စတင် ရောင်းချပါတယ်။2နှစ်အကြာမှာ အရောင်းဆိုင်များက ည 8 နာရီနဲ့9နာရီမှာ ရောင်းချကြပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ Black Thursday ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ နောက်နှစ်များမှာ အခြားအရောင်းဆိုင်များက ဒီနည်းကို ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးတော်နေ့မှာ စောသထက်စောအောင် ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ အရောင်းဆိုင်အချို့နဲ့ မီဒီယာများက အဲဒီနေ့ကို Gray Thursday , Brown Thursday လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
Forbes ရဲ့ Entrepreneurs Column မှာ 2013 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့က ဖော်ပြချက်အရ Black Friday ရဲ့ အွန်လိုင်းဗားရှင်း Cyber Monday ဟာ အလွန်လူကြိုက်များနေပြီး ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်လုံး ရောင်းအားကောင်းနေပါတယ်။ CBS News ရဲ့ Travel Editor ဖြစ်သူ Peter Greenberg က “ Black Friday မှာ ဈေးဝယ်ချင်ရင် မြေပြင်ဈေးဆိုင်တွေကို ရှောင်ပါ။ Black Friday , Cyber Monday အားလုံးဟာ Cyber Week ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပါတယ် ” လို့ ပြောပါတယ်။
Cyber Monday စကားလုံးကို 2005 ခုနှစ်မှာ National Retail Federations ရဲ့ Shop.org က ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Black Friday ပြီးနောက် တနင်္လာနေ့ကို Cyber Monday အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်နေ့ အားလပ်ရက်များမှာ ဈေးမ၀ယ်နိုင်လောက်အောင် အလုပ်များနေသူများ သို့မဟုတ် လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို ရှာမတွေ့သူများအတွက် တနင်္လာနေ့မှာ အွန်လိုင်းကနေ ဈေးဝယ်နိုင်အောင် Cyber Monday ကို ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ အိမ် သို့မဟုတ် အလုပ်ကနေ အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့် ဈေးဝယ်နိုင်ပါတယ်။ 2013 ခုနှစ်မှာ Cyber Monday ရဲ့ အွန်လိုင်းရောင်းအားဟာ ယခင်နှစ်ကထက် 18 ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုတိုးတက်လာပြီး 1.73 ဘီလီယမ်ဖိုး စံချိန်တင် ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ လူတစ်ဦးလျှင် ပျမ်းမျှ ၀ယ်ယူမှုတန်ဖိုးမှာ 128 ဒေါ်လာ ဖြစ်ပါတယ်။ 2014 ခုနှစ်မှာ Cyber Monday ဟာ အဲဒီနှစ်အတွက် ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး အွန်လိုင်းမှာ2ဘီလီယမ်ဖိုး ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ ယခင်နှစ်ကထက် 17 ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous article10.1 လကျမ မကျြနှာပွငျ ၊ Snapdragon 821 SoC အသုံးပွုထားတဲ့ LG G Pad510.1 ကို ကွညော
Next articleစမတျနာရီ ထုတျလုပျလာဖို့ ရှိနတေဲ့ OnePlus